ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / အဘယ်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့မီးဖိုချောင် Faucet တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစေ
2020 / 11 / 09 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 6044 0
သင့်အနေဖြင့်အပိုအဆင့်မြင့်သောမီးဖိုချောင်သုံးဆေးခန်းများသို့မရောက်မချင်းပျောက်ဆုံးနေသောအရာကိုသိရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ထိတွေ့ခြင်းမှသည်ရွေ့လျားသည့်အာရုံခံကိရိယာ faucets အထိအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ သငျသညျကွဲပြားဒီဇိုင်းများအများကြီးအတွက် faucet ရနိုင်ပြီး, သင်ပင်တစ် ဦး facet မှုတ်စက်ထက် pre-down-pull သို့မဟုတ်ဆွဲထုတ်မှုတ်ဆေးရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ျာထိပုတ်ပါကသင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပြီးသင်၏မီးဖိုချောင်အတွက်သင်ကုန်ဆုံးချိန်သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။ သင်ကအရည်အသွေးမြင့်သောအသာပုတ်လိုလျှင်, စျေးဝယ်ခြင်းထက်စောစောစီးစီးအကဲဖြတ်ခြင်းကိုသင်ဖတ်သင့်သည်။ ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်ဒေါ်လာရာဂဏန်းခန့်တန်သောဈေးနှုန်းချိုသာသောဆီဖြင့်ကြိတ်ထားသောကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်လျော်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောထိပုတ်ပါရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်သင်ရှာဖွေချင်တဲ့ပစ္စည်းအတော်များများကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းသည်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုဒီမှာဖတ်ပါ မီးဖိုချောင် faucet ချ Matte အနက်ရောင်ဆွဲ.
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင် faucet အသစ်ကိုသင်ရှာဖွေချင်တဲ့စွမ်းရည်
သင်သည်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောစျေးကိုအသာပုတ်သည်အထိယခုပုံမှန်အားဖြင့်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ faucets အများစုသည်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ကြပြီးရေနှင့်ထိတွေ့သောအခါကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုများကဲ့သို့အကျင့်ပျက်ပြားခြင်းမရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ faucet ကိုပိုမိုကြာရှည်စေပြီးသင်သုံးစွဲသောငွေအတွက်အပိုထပ်ဆောင်းသည်။ Delta၊ Moen, Kohler, Danze စသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သူ၏ဘုံဘိုင်များအတွက်ကြေးများစွာအသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သည်ထူးခြားသောထိတွေ့မှုများစွာဖြင့်လာသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သည်နောက်ကျကျန်နေသည်။ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောခေတ်ကိုသင်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရွေ့လျားအာရုံခံကိရိယာကိုအသာပုတ်ပါကဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏မီးဖိုချောင်တွင်အလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့် touch technology သည်အလွန်ဆင်တူပြီးတူညီသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သောကြောင့်လည်းမှတ်သားရန်လိုအပ်သည်။
သင်သေချာစေရန်နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းမှာအဆို့ရှင်နည်းပညာဖြစ်သည်။ Valves များသည်မီးဖိုချောင် faucet တွင်အများဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး Delta ကဲ့သို့သောအေဂျင်စီအချို့ကသင်၏အဆို့ရှင်များသည်သက်တမ်း ၅ သန်းကျော်သက်တမ်းရှိစေရန်အာမခံသောနည်းပညာကိုပေးသည်။ ဘုံဘိုင်အများစုသည်ကြွေထည်အဆို့ရှင်အချို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောသက်တမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာစေရန်သင်လိုအပ်သည်။
အပြီးသတ်နှင့် faucet ကိုကန့်သတ်ထားသောတစ်သက်တာအာမခံချက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ သင်လိုအပ်သောနိဂုံးမှာတစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်းအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ Faucets များသည်၎င်းတို့ကိုမည်မျှပုံမှန်အလွဲသုံးစားပြုမှုပေါ် မူတည်၍ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ခန့်ပိတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာခန့်မှန်းခြေပြောင်းလဲခြင်းကိုခန့်မှန်းရန်မလိုအပ်ပါ။
ထိပုတ်ပါပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြည့်ပါကသင်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုက်သည့်အရာနှင့်သင်မလုပ်သောအရာကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောအရာမဟုတ်ပါ။ ထိပုတ်ပါအားလုံးသည်တူညီသောတည်ဆောက်မှုမရှိကြပါ။ အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ သင်အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ပါက၎င်းတို့သည်ဈေးမကြီးသောကြောင့်ငွေရှာရန်သင်ပိုအသင့်ရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်စျေးနှုန်းချိုသာသော faucet အတွက်အပေးအယူသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်ကိုရရှိစေသည်။ ဒီစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ပြတ်တောက်မှုကြီးကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ပထမအဆင့် faucets ကို drip မဟုတ်သောနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်မှန်ကန်သော faucet အတွက်နည်းနည်းပိုပေးဆပ်နေစဉ်သင်ရရှိသောနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းမှာနောက်ထပ်စွမ်းရည်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်သောအသာပုတ်မှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအရာများစွာပါဝင်နိုင်သည်။
အပြုသဘောဆောင်ပါစေအကောင်းဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော faucet ကိုမရွေးချယ်ပါနှင့်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကဝေဖန်မှုအချို့ကိုသင်လေ့လာဖူးပါကသင်၏မီးဖိုချောင်ရေသန့်ခန်းအသစ်တွင်မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ရှေ့သို့ :: အလွန်ကြီးစွာသောမီးဖိုချောင် Faucet စေ5အရာ နောက်တစ်ခု: မီးဖိုချောင် faucets အစားထိုးဖို့ဘယ်လို?
ဘယ်သူက Trustmi Faucets ကိုလုပ်သလဲ - အရည်အသွေးကောင်းသလား
2022 / 01 / 17 517
Soka Faucets ကို ဘယ်သူလုပ်သလဲ - Soka အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်း
2022 / 01 / 17 501
၁၀ စင်တီမီတာရှိတဲ့ ရေဆေးဇလုံရဲ့ထောင့်မှာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဗီရိုကို ဘယ်လိုဒီဇိုင်းဆွဲမလဲ။
2022 / 01 / 17 544
ရေချိုးခန်းထဲမှာ အောက်ထပ်အပူတွေ တပ်ဆင်ရတာ ဝမ်းနည်းမိတယ်..။
2022 / 01 / 17 645
ရေချိုးခန်းအတွင်း ကြမ်းပြင်တွင် ကြမ်းပြင်ရေမြောင်းကို ထိရောက်စွာ ဖောက်ထုတ်နိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းသည်...
2022 / 01 / 16 671
ပြတင်းပေါက်မရှိသော ဗလီတွင် စိုစွတ်ခြင်း၊ အမှောင်နှင့် အနံ့ဆိုးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနည်း...
2022 / 01 / 16 596